Etu esi amata ma ezuru WiFiị ​​m na gam akporo | Akụkọ akụrụngwa
N'oge a inwe netwọk WiFi n'ụlọ, ọfịs, ogige azụmahịa na ndị ọzọ bụ ihe a na-ahụkarị, na-enweghị obi abụọ nnukwu uru ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ n'ụzọ niile. Ugbu a ngwaọrụ jikọọ na netwọk mfe na ngwa ngwa na njikọ a nke ndị ọrụ na-enye anyị na nke ahụ na-enye anyị ohere ijikọ na ịntanetị na-enweghị mkpa eriri ma ọ bụ nke yiri ya.
Ihe a niile dị mma ma ọ nwere ike bụrụ na ndị mmadụ enweghị ikikere anyị iji jikọọ na netwọk WiFi anyị jikọọ na nke a nwere ike imetụta ọsọ njikọ ahụ, na mgbakwunye na ikwe ka ndị ọzọ nwee ọnụ ụzọ azụ nke ha nwere ike ịnweta data anyị, foto, akwụkwọ, wdg.
N'okwu a, taa anyị ga-ahụ na netwọkụ WiFi bụkwa isi ihe na-atọ ụtọ maka ndị na-achọghị ịkwụ ụgwọ maka njikọ ha ma anyị enweghị ike ikwe ka nke a na netwọkụ anyị. Otu esi amata ma ezuru WiFi m na gam akporo taa bụ nhọrọ dịịrị ndị ọrụ niile yana obere usoro dị mfe anyị ga-achọpụta ndị a achọghị njikọ na netwọkụ anyị.
1 Gbanwee okwuntughe nche site n’oge ruo n’oge
2 Lelee ngwaọrụ na adreesị MAC
3 RedBox - Nchọpụta Ntanetị, ngwá ọrụ maka ịchọpụta njikọ
Gbanwee okwuntughe nche site n’oge ruo n’oge
Tupu ịmalite ọrụ nke ịchọpụta onye na-abanye na njikọ WiFi anyị n'ụzọ iwu na-akwadoghị site n'ụlọ, ọrụ ma ọ bụ ihe yiri ya, anyị nwere ike ịme usoro dị oke mkpa nke anyị nwere ike izere ịnweta ndị a achọghị. Ọ bụghị maka izochi ihe ọ bụla ma ọ bụ gbanwee ihe mgbagwoju anya, naanị site na ịgbanwe paswọọdụ site n'oge ruo n'oge anyị nwere ezigbo ihe mgbochi iji gbochie ohi njikọ. O nwere ike iyi ezigbo ihe, mana ọ bụ kpomkwem ụdị mgbanwe ndị a dị mfe ma dịkwa ngwa ịme bụ ndị dị mkpa iji dobe netwọk WiFi anyị.
Nọmalị a nhazi a na-eme site na ịnweta anyị ọrụ rawụta na ihe anyị nwere ime bụ jikọọ rawụta, ma site na PC / Mac ma ọ bụ site na ekwentị mkpanaaka, anyị na-emeghe nchọgharị na weebụ ma tinye adreesị. Nnweta dị iche maka onye ọrụ ọ bụla mana ọ na-adịkarị mfe ịchọta na weebụ ma ọ bụ na ibe ndị ọrụ ahụ. Movistar eweputara dika uzo ndi uzo nile n’uwa anyi: 192.168.1.1, 192.168.elu o 192.168.0.1, 192.168.0.l N'ihe banyere Orange, inye ihe atụ ọzọ, ha bụ: http://livebox o http://192.168.1.1 na ozugbo e nwere anyị ga-etinye ohere paswọọdụ na-abụkarị 1234 ma ọ bụ Admin na na ọ bụ ya.
N'aka nke ọzọ, ekwesịrị ikwu na anyị nwere ike ijikwa njedebe nke netwọkụ ụlọ anyị ma ọ bụ kwụsị WPS, ndị a bụ usoro ndị ọzọ anyị nwere ike ịme iji zere nnweta achọghị, mana n'ikpeazụ usoro ndị a abụghị 100% nchekwa, yabụ emela na-atụ anya na Site na nke a, a na-edozi nsogbu ahụ ruo mgbe ebighi ebi, ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na ịme usoro ndị a ọ na-eme ka ịnweta netwọk anyị dị mgbagwoju anya.
Lelee ngwaọrụ na adreesị MAC
Nke a bụ nhọrọ ọzọ anyị nwere mgbe niile na ntanetị WiFi anyị iji chọpụta onye na-abanye na netwọkụ anyị na-enweghị nkwenye anyị. Ihe anyị ga-eme bụ ileba anya na ndepụta nke ngwaọrụ ejikọrọ ma jiri ya tụnyere adreesị MAC nke ọ bụla n'ime ha, anyị nwere ike ihu na ihu mara ngwaọrụ.
Enwere nsogbu na usoro a, nke ahụ bụ na ọtụtụ ngwaọrụ ejikọrọ na netwọkụ WiFi anyị, dịka ngwaahịa niile amamịghe, bọlbụ ọkụ, ndị na-ekwu okwu, ihe mkpuchi, wdg. na-eme ka o sie ezigbo ike ịchọpụta ndị omekome na netwọk anyị na karịa ihe niile ọ na - eme ka ọ bụrụ ogologo oge ịrụ ọrụ.
RedBox - Nchọpụta Ntanetị, ngwá ọrụ maka ịchọpụta njikọ
Ọ bụ a ọhụrụ ngwa / ngwá ọrụ na e ulo oru na Ndị na-emepụta XDA kpamkpam n'efu (na mgbasa ozi ha) maka ekwentị mkpanaka gị na nke ahụ na-enye anyị nhọrọ a iji chọpụta ma jikwaa netwọkụ niile n'ụzọ dị mfe ma dịkwa n'usoro nke ọma ebe ọ na-enweta data site na adreesị MAC yana n'ụzọ dị otú a sonyere njikọ . Anyị nwere ike ịhụ nkọwa njikọ niile nke netwọki WiFi, chọpụta njikọ ndị achọghị ma ọ bụ ọbụna lelee njedebe nke njikọ anyị. Ọ bụ n'ezie ihe na-akpali ngwa maka ndị ọrụ niile maara na ha achọghị ịnweta njikọ ha.
Ọrụ nke ngwa ọrụ a dị mfe ma anyị ga-agbakwunye netwọk WiFi anyị ka o wee nwee ike nyochaa ngwa ọrụ anyị jikọtara na ya. Mgbe ahụ ọ ga - amalite ịchọ njikọ ọ bụla nke anyị na - edeghị aha. O doro anya na ngwa ahụ chọrọ ikikere iji nweta netwọk na ịnweta ọnọdụ anyị na ịmara SSID na BSSID. Tozọ iji rụọ ọrụ ngwá ọrụ a dị mfe site na isoro usoro ndị a:
Ihe mbụ anyị ga - eme bụ ibudata ngwa ahụ
Ugbu a, anyị na-enweta nhọrọ "Intruder detector" iji malite usoro ndebanye ngwaọrụ
Anyị na-abanye na 'Onye nchọpụta ọhụụ' ma anyị hapụ ya ka ọ nyochaa akụrụngwa ahụ. Ugbu a, mgbe ọ gwụchara, anyị na-aka ndị enyere ikike akara
Anyị gbakwunye aha maka onye ọrụ na-enwetaghị ikike ma họrọ ọnọdụ nchọpụta MAC Adreesị
Oge mkpumkpu dị mkpirikpi na-enye ohere ị nweta njikọ na-achọghị ngwa ngwa mana ọ na-erepịa ọtụtụ batrị ama ka ị kpachara anya
Anyị pịa «Mepụta» na ngwa ga-nyochaa netwọk maka intruders. Ọ bụrụ n ’ịchọputa ihe ma ọ bụ ọ ga - ezitere anyị ọkwa ma gosipụta na« My detectors »
Ma nke ahụ bụ ya, ugbu a, anyị nwere ike ịhụ ma ọ bụrụ na Ezuru WiFi n'ụzọ dị mfe na ngwa ngwa. Na ngwa a arụnyere na ekwentị mkpanaaka anyị, anyị ga-enwe ike ịdọ aka na ntị oge niile oge mmadụ nwetara netwọkụ WiFi anyị na-enweghị ikike, mana anyị ga-eleba anya na batrị nke ngwa a ebe ọ na-achọ njikọ mgbe niile yana ya mere na ị nwere ịmata ka esi ejikwa ya na ịgaghị esi na batrị pụta mgbe ị nọ n’azụ ọrụ.
N'ụzọ ezi uche dị na ya Enweghị nhọrọ iji gbochie achọghị ịnweta na njikọ WiFi anyị na na ọ bụ kpam kpam mma, ma anyị nwere ike izere ụfọdụ achọghị ohere na-enweghị ka o siwere ike ndụ anyị dị ka anyị kọwara n'elu, nanị na a akara na mgbanwe nke okwuntughe nke anyị rawụta nwayọọ nwayọọ nwere ike ịbụ ezigbo nhọrọ iji gbochie ndị a accesses. Mgbe ahụ, anyị nwere ike iji ngwa ndị na-atọ ụtọ dịka RedBox nyochakwuo ntakịrị ma zere njikọ ndị a achọghị ka o kwere mee.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Nkuzi » Etu ị ga - esi mara ma eziri WiFi m na gam akporo
Panasonic na-ewebata GZ2000, TV kachasị n'ụwa